एस्ली, रियल इस्टेट ब्लगमा लेखक - रियल्टी डब्ल्यूडब्ल्यू:
लेखक अभिलेखालयबाट: Ashley
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: मार्च 4, 2020 13: 18
फ्लोरिडामा नगद बिक्रीको लागि घर? के आशा गर्नु
घर बेच्ने प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ जुन पूर्ण छ बिभिन्न चरणहरूको संख्या। तपाईंले सूचि बनाउनु पर्छ, घर देखाउँनुहोस्, एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहोस्, निरीक्षण गर्नुहोस् र अन्य धेरै काम गर्नुहोस्। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यस प्रक्रिया धेरै लामो समय लिन सक्दछ। यस बावजुद, लाखौं अमेरिकीहरू आफ्नो घरहरू हरेक वर्ष बेच्नुहोस्।
धन्यबाद, यो सधैं एक मेहनती लामो प्रक्रिया हुनु हुँदैन घर बेच्नुहोस्। तपाईंको घर छिटो बेच्ने उत्तम तरिका भनेको नगदमा बेच्नु हो। नगद खरीददारहरू सामान्यतया द्रुत रूपमा सर्न चाहन्छन्। यस कारण, प्रक्रिया पारंपरिक घर बिक्री को समय को एक अंश लिन्छ। यदि तपाईं फ्लोरिडामा नगदका लागि आफ्नो घर बेच्दै हुनुहुन्छ भने, यस लि quickly्क जाँच गर्नुहोस् निश्चित गर्नुहोस् कि यो छिटो र सजीलो गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बढि जान्नको लागि: हामी घरहरू फ्लोरिडा खरीद गर्दछौं
यद्यपि नगदीका लागि घर बेच्दा तपाईले के आशा गर्नु पर्छ? तपाईं कसरी उत्तम तयारी गर्नुहुन्छ र सुनिश्चित गर्नुहुन्छ कि तपाईंलाई उत्तम डिल सम्भव छ? दिमागमा राख्दै, यो ब्लग पोष्ट फ्लोरिडामा नगदको लागि तपाईंको घर बेच्दा के अपेक्षा गर्ने हो जान्छ।
सोधेको मूल्यमा सार्नको लागि अपेक्षा गर्नुहोस्
रियल इस्टेट बिक्रीको बेला सम्झौताहरू अविश्वसनीय रूपमा सामान्य हुन्छन्, र यो नगद बिक्रीको साथमा विशेष गरी साँचो हो। तपाईंले ज्यादै पनी मूल्य अविश्वसनीय रूपमा कम छ भने, तपाईं प्राय जसो केसहरूमा सोधिएको मूल्यमा तल सार्ने आशा गर्न सक्नुहुनेछ। बोल्दै सोध्नु मूल्य, जब तपाइँ बिक्रीको लागि तपाइँको घर सूचीबद्ध सूचीबद्ध एक निष्पक्ष सोध्ने मूल्य सेट गर्न निश्चित गर्नुहोस्। जब तपाईं यो निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईं घरको लागि पर्याप्त पैसा पाउनुहुन्छ, मूल्य ज्यादै उच्च सेट गर्नाले महिनौंसम्म बजारमा घर बसिरहेको हुन सक्छ।
तपाईंको क्षेत्रमा तुलनाहरू हेर्नुहोस् र कुनै मूल्य सेट गर्नु अघि तपाईंको घरको अवस्थालाई विचार गर्नुहोस्। साथै, यस्ता चीजहरूको बारे सचेत रहनुहोस् जुन तपाईंको शहर खरीददारहरू वा विक्रेताहरूको बजार हो। तपाईको क्षेत्रका खरीददारहरूले के खोजिरहेका छन् भनेर जान्नु पनि बुद्धिमानी हुन्छ।
तपाइँको तालिका परिवर्तन गर्न को लागी अपेक्षा गर्नुहोस्
तपाईसँग नियमित तालिका हुनसक्छ जुन तपाईले पालना गर्न चाहानुहुन्छ, तर तपाईले घर बेच्ने बित्तिकै परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्नुपर्दछ। खरीददारहरू प्राय गुणहरू हेर्न चाहन्छन् जब उनीहरूका लागि यसले काम गर्दछ, त्यसैले तपाईंलाई लचिलो हुनु आवश्यक छ। यो समावेश हुन सक्छ तिम्रो घर देखाउँदै साँझमा, सप्ताहन्तमा वा अन्य समयमा जुन तपाईंलाई सधै राम्रो नलाग्न सक्छ।
यो विशेष गरी सत्य हो जब यो नगद बेच्ने कुरा आउँछ। ती व्यक्तिहरूले घरमै पैसा जम्मा गर्ने क्रममा प्रक्रिया चाँडै लैजान चाहन्छन्, त्यसैले तपाईले सक्षम हुन आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं कुनै खास समयमा अवलोकन कार्य गर्न सक्षम हुनुहुन्न, तिनीहरूले अरू कसैले पाउन सक्छन् कि। नतिजाको रूपमा, तपाईले आफ्नो घरको तयारीका लागि तयार हुन निश्चित हुनु आवश्यक छ त्यसैले तपाईं एकछिनको सूचनामा हिंड्नको लागि तयार हुन सक्नुहुन्छ।
घर बेच्दा निश्चित प्रकारको खरीददारको आशा गर्नुहोस्
घरहरू किन्दै गरेको बहुसंख्यक मानिसहरूले त्यसो गर्न जाँदैछन् धितो संग। जबकि यो लामो समय मा नगद संग तिर्न भन्दा अधिक खर्च, जबकि यो अक्सर मासिक भुक्तान प्रबन्ध गर्न सजिलो छ एक पटक मा ठूलो पैसा नगद ड्रप भन्दा। नतिजाको रूपमा, तपाईंले नगदका लागि घर बेच्ने बेला निश्चित प्रकारको खरीददारको आशा गर्न आवश्यक पर्दछ।
सामान्यतया, घर जग्गा कम्पनीहरू, फ्लिप घरहरू खोज्ने व्यक्तिहरू वा भाडा सम्पति खोज्नेहरू नगदका लागि घर किन्न रुचि राख्ने व्यक्तिहरूको साधारण प्रकारका हुनेछन्। तिनीहरू प्रक्रियाको यस चरणलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन् ताकि तिनीहरू चाँडै अर्कोमा जान सक्दछन्।
अन्तमा, हामी आशा गर्दछौं कि यस लेखमा दिइएको जानकारीले नगदीका लागि घर बेच्दा तपाईलाई के अपेक्षा गर्ने सिक्न मद्दत पुर्‍याएको छ।
पोस्ट रियल एस्टेट बेच्ने | Tagged घर बेच्दै, घर चाँडै बेच्दै, रियल एस्टेट बेच्ने | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित जनवरी 24, 2020 by Ashley
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: जनवरी 24, 2020 13: 00
धेरै जसो अमेरिकीहरू अझै आफ्नो घरहरू राख्छन्, त्यहाँ भाँडामा लिने निर्णय गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। ओभर अमेरिका 35% भाडामा लिनेहरू हुन् जुन हालका दशकहरूमा कुनै पनि समय भन्दा बढि छ। एउटा अपार्टमेन्ट भाँडामा लिदै लाभ प्रदान गर्दछ जस्तै अधिक गतिशीलता र लचिलोपन हुनु, र रखरखावको बारेमा चिन्ता लिनु हुँदैन।
जब कि घर किन्नु भन्दा अपार्टमेन्ट भाँडामा लिन सजिलो हुन्छ तर यो सँधै त्यस्तो हुँदैन। यो विशेष गरी सही हो यदि तपाईं समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ वा नराम्रो उधारो। नराम्रो उधारोले तपाईंलाई उधारो लिनेहरू र घरमालिकहरूको लागि बढी जोखिमपूर्ण बनाउन सक्छ, र अधिक तपाईंसँग काम गर्न इच्छुक नहुन सक्छ। जस्तो तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यसले अपार्टमेन्ट भाडामा लिन कठिन बनाउँछ।
जहाँसम्म, खराब वा समस्याग्रस्त क्रेडिट भएकोले यो असम्भव बनाउँदैन। त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ र सुझावहरू पछ्याउन सक्नुहुनेछ तपाई अझै पनी क्रेडिटको साथ भाडा लिन सक्षम हुनुहोस्। ध्यानमा राख्दै, यो लेख समस्याग्रस्त क्रेडिटको साथ अपार्टमेन्ट भाँडामा दिन मद्दत गर्न केहि सुझावहरू दिदैछ। चाहे तपाई हेरिरहनु भएको छ डलास मा अपार्टमेन्ट वा कुनै अन्य शहर, यी सुझावहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
एक अपार्टमेन्ट को लागी अधिक अग्रिम तिर्न प्रस्ताव
एक ठूलो कारण यो छ कि खराब क्रेडिट संग अपार्टमेन्टहरु भाँडा संग संघर्ष गर्नु हो किनभने नराम्रो क्रेडिट दर्शाउँछ कि उनीहरु भाडामा पूर्वनिर्धारित जोखिम हो। यो बनाउन सक्छ केहि जमिन्दारहरू बुझ्न चिन्तित। तर तिनीहरूको चिन्ता कम गर्नका लागि चीजहरू मध्ये एक बढि अगाडि भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गर्नु हो। यो ठूलो सुरक्षा निक्षेपको रूपमा हुन सक्दछ वा धेरै महिनासम्म भाडा अगाडि भुक्तान गर्न सक्दछ।
यी मध्ये कुनै पनि काम गर्दा घरमालिकको चिन्ता कम हुनेछ। यो पनि तपाईं देखाउन को लागी प्रतिबद्ध र एक राम्रो भाडामा गर्न इच्छुक छन् देखाउँदछ। केही जमिन्दारहरूले तपाईंलाई जोखिम शुल्कको रूपमा प्रत्येक महिना बढी तिर्ने पनि चाहन्छन्। यो तपाईं मा निर्भर गर्दछ कि तपाईं यो गर्ने कि नगर्ने। जहाँसम्म, यदि तपाईलाई साँच्चिकै स्थान मन पर्छ भने, हरेक महिना थोरै पैसा तिर्नु यसको लागि लायक हुन सक्छ।
यदि तपाईंको क्रेडिट खराब छ र तपाईंलाई अपार्टमेन्ट भाँडामा लिन कठिनाई भइरहेको छ भने, एक कग्ग्नियर भएमा प्राय: मद्दत गर्न सक्दछ। एक हस्ताक्षरकर्ता त्यस्तो व्यक्ति हो जसले तपाइँसँग तपाइँको भाँडा आवेदनमा हस्ताक्षर गर्दछ र भुक्तानी लिन वा कभर गर्नको लागि सहमत हुन्छ यदि तपाइँ पूर्वनिर्धारित हुनुहुन्छ भने। यो महत्वपूर्ण हुनेछ तपाईको जोखिम कम गर्नुहोस् घर मालिकको आँखामा।
अवश्य पनि, तपाईंको कामिग्नरसँग यस काम गर्नको लागि सभ्य क्रेडिट हुनु आवश्यक छ। एक cosigner हुनु को ठूलो जोखिम को कारण, एक cosigner अक्सर एक परिवारको सदस्य वा साथी हुनु आवश्यक पर्दछ। यदि तपाइँलाई को लागी पर्याप्त को लागी को लागी को लागी को लागी को लागी को पाउन को लागी सक्षम हुन को हुनुहुन्छ, सावधान रहनुहोस् र सँधै आफ्नो भुक्तानी गर्नुहोस्। यदि होईन भने, सम्बन्ध सजिलै बिगार्न सक्छ।
एक कडा र स्थिर आय छ
यदि तपाईंको क्रेडिट इतिहास अलि समस्याग्रस्त छ भने, तपाईंसँग ठोस आय भएको देखाउँदा घरमालिकको concernsण चिन्ता हटाउन मद्दत गर्दछ। देखाउँदै कि तपाईंले कुनै पनि महिनाको अवधिमा तपाईंको भाँडा कभर गर्नको लागि पर्याप्त बनाउनु भएको छ र तपाईंलाई घर भाडामा बढी आरामदायक महसुस गर्दै घर मालिकहरू लामो बाटोमा जान्छन्।
अवश्य पनि, भुक्तानी स्टबहरू वा बैंक स्टेटमेन्टहरूमार्फत तपाईंको आय प्रमाणित गर्न तयार हुनुहोस्, किनकि प्रत्येक घरमालिकले यसको लागि तपाईंको शब्द मात्र लिने छैन। साथै, यदि यो एक विकल्प हो भने, तपाईंको भाँडा तपाईंको बैंक खाताबाट स्वचालित रूपमा लिने कुरामा सहमत हुनुहोस्। यो गरेर, तपाईं जमिन्दार देखाउँदै हुनुहुन्छ जुन तपाईं भाँडा समयमै र प्रत्येक महिनामा भुक्तानी गर्ने इरादा राख्नुहुन्छ।
अघिल्लो अपार्टमेन्ट मालिकको सन्दर्भ वा सिफारिशहरू देखाउनुहोस्
तपाइँको चट्टान क्रेडिट ईतिहासको बावजुद तपाइँ ठोस भाडावाला हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक सिफारिस वा सन्दर्भहरू देखाउनु हो। जस्तै भर्ती प्रबन्धकहरू अघिल्लो रोजगारदाताहरूबाट सन्दर्भ चाहिन्छ, घरमालिकहरूले अन्य घरमालिकहरूबाट सिफारिसहरू हेरेर आनन्द उठाउनेछन्। यी सँगै ल्याउँदा तपाईं एक जिम्मेवार भाडामा लिनुहुन्छ भनेर देखाउन सक्छ र कुनै समस्या पैदा गर्दैन।
जबकि अघिल्लो जमिन्दारहरूबाट नोटहरू सबै भन्दा राम्रो हुन्छन्, यहाँसम्म कि रोजगारदाता वा रूममेटहरूको नोटहरू पनि तपाईंको स्वीकृत हुन सक्ने सम्भावना बढाउन मद्दत गर्दछ। कुनै अनुमोदन तपाईंको केस मद्दत गर्न र तपाईंलाई अधिक आकर्षक भाडा बनाउन सक्छ।
अन्तमा, यस लेखले तपाईंलाई खराब वा समस्याग्रस्त क्रेडिटको बावजुद अपार्टमेन्ट भाँडामा दिन सहयोग पुर्‍याउँछ।
पोस्ट असंगठित | Tagged अपार्टमेन्ट, डलास, एउटा अपार्टमेन्ट भाँडामा लिदै, uptown डलास | टिप्पणी छोड्नुहोस् |